Hadalkii Wasiirka Arrimaha Dibadda Baxreyn Iyo Fal Celiskii Soomaalida Baraha Bulshada. - Latest News Updates
Hadalkii Wasiirka Arrimaha Dibadda Baxreyn Iyo Fal Celiskii Soomaalida Baraha Bulshada.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Baxreyn Khaalid ibnu Ahmed ayaa bartiisa twitter ka waxaa uu soo dhigey hadal uu dowladda Soomaaliya ku dhaliilay asagoo daba socdey muran dublumaasiyadeedka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraatka.
” Dowladda Imaaraat ku waxay abaabushay shirar dhawr ah oo Soomaaliya lagu taageerayey ayadoo uu goob joog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya, waxayna imaaraat ku Soomaaliya ka caawiyeen la dagaalanka burcad badeeda ayagoo siiyey taageero dhaqaale, hub iyo daawo, laakiin Soomaalidu waxay ugu badashay inkiraad iyo xumeyn ama sumcad dil, waxayna hoosta ka galleen dhabta cadowga umadda, Illaahay baa nagu filan una wanaagsan wax la talo saarto” khaalid Ahmed
Caadiyan maa ahan badanaa dhaqanka dublumaasiyadda aduunka ka dhaca in muran dublumaasiyadeed oo labo dowladood ka dhexeeya in dowlad kale si qaawan u soo dhex gasho oo mid ula safato, gaar ahaan marka dowladaan soo dhex galaysa uusan wax xiriir xumo hore ah kala dhaxeyn dowladda ay ka safaneyso.
Hadalkaan kasoo yeeray wasiirka Baxreyn wuxuu soo jiitey oo dood adag dhex dhigey bulshada Soomaalida iyo carabta ee sida weyn u raaca wax yaabaha xaasaasiga ah ee lagu qoro xisaabaatka ay twitter-ka ku leeyihiin shaqsiyaadka caank ah ee aarada ama wararka sameeya.
Inka badan dhawr boqol oo qof ayaa jawaabo iyo jawaab celin isku dhaafsadey bogga wasiirka Baxreyn uu ku lee yahay twitterka.
Soomaali badan oo u badan dhalin yaro afka carabiga si fiican u yaqaan ayaa doodaan ka qeyb galay ayagoo difaacaya mowqifka Soomaaliya.
Doodu waxay u badneyd hadalo kulul oo mararka qaarkood aflagaado iyo cey la is dhaafsaneyey.
Shaqsiyaadka carabta ah ee taageerayey warka wasiirka oo dhalashadoodu badankood ka muuqatay imaaratiyiin iyo sucuudiyiin waxay Soomaaliya ku tilmaamayeen dal burburay oo gaajo iyo argagaxiso degtay kuna abaal dhacay dowladihii caawinayey.
Laakiin shaqsiyaad kale oo carbeed ayaa dowladaha Isbahaysiga ku eedeynayey inay doonayaan Soomaaliya in loo burburiyo sida Yamen iyo Iiibiya, waxayna wasiirka Baxreyn iyo dowladdaha kale ugu baaqayeen inay Soomaaliya arrimaheeda gudaha faraha kala baxaan lagana daayo xad gudubka lagu hayo qaranimadeeda.
Hase ahaatee, waxaa xiiso badan lahaa fal celiska dhalinyarada Soomaalida ah ee ka qeyb qaadatay doodaas.
Waxaa ka muuqdey dhalin yaradaas kalsooni iyo qab uu ka muuqdo dhaqankii Soomaalida lagu yaqaanay, waxey ku doodeen in ay abaal u hayaa cid kastoo Soomaaliya caawisay laakiin taas aysan ku badalan karin inay aqbalaan siyaasad wax u dhimeysa qaranimada iyo madax banaanida dalkooda.
Dhalinyarada qaarkood carro xooggan ayaa ka muuqatey waxeyna cay iyo hadalo kulul u jeediyeen wasiirka Baxreyn iyo dowladaha kale ee carbeed oo ay ku eedeeyeen inay ka shaqeynayaan siyaasad iyo falal Soomaaliya looga abuurayo qalalaase iyo khilaafaad.
Hiba Shookari oo ka mid aheyd dhalinyarad sida wanaagsan Soomaaliya u difaacdey aadna uga qeyb-gashay doodaan ayaa tilmaantay in Soomaaliya ixtiraamayso ciddii ixtiraamta ayna xaq u leedahay inay difaacato dannaheeda qaran.
Ma jirto cid aan raali uga noqonayno inay dalkaanaga kala qeybiyaan ayey tiri Hiba oo hadal keeda uu ka muuqdey sida ay ugu weyn tahay Soomaalinimadu.
Asad Ibraahim Cadaani oo ah qoraa Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu caqli celiyey wasiirka Baxreyn kuna nuux nuuxsadey sida ay lagama maarmaan u tahay in aan mashaakil ka dhex jira dowladaha khaliijka loosoo rarin Soomaaliya.
Asad ayaa ku faanay Soomaaliyaba inay caawin jirtay dowladaha khaliijka xili ay ahaayeen dad aradan oo fakhri ah.
Guud ahaan doodaani waxay banaanka soo dhigtay inay jiraan jiil cusub ay ka go’an tahay inay difaacdaan dhaxalkii awoowayaashood iyo qaranimadii ay dhalliyeen dhalinyaradii gumeystihii cadaa dalka ka saarey.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee doodan ka qeyb gashay waxey si weyn ugu celceliyeen inaysan macno ugu fadhin sida dowladuhu u kala lacag iyo dhaqaallo badan yihiin laakiin ay ku faanayaan inay leeyihiin dal Soomaaliya la dhaho lehna mustqabal wanaagsan.
Doodahaas iyo weerarada afka ah ee ay dowldaha iyo muwaadiniintu is dhaafsanayaan, kasokow waxaan la in kiri karin in caalamka casriga ah ay dowladuhu yeeshaan iskaashi iyo wax kala badalasho ku dhisan masaalix lawadaago, Soomaaliyana waxaa maslaxadeedu ku jirtaa inay xiriir wanaagsan la yeelato dowladaha caalamka, gaar ahaan kuwa carbeed oo aan danno badan wadaagno.
Sidoo kale dowladaha dannaha ka leh Soomaaliya waxaa la gudboon inay dannahooda iyo masaalixdooda usoo maraan wado sax, kana fogaadaan siyaasaddaha keenaya cadawada iyo kala fogaanshaha oo aan cidna danni ugu jirin.
Ma jirto dowlad ay ka suurta gali karto inay qaranimadeeda iyo midnimadeeda dhuleed ku badalato kaalmo kooban oo dal kale uga yimaada Soomaaliyana kama duwana kuwaas haddaan lagu beegsaneyn qaran jabkii ku dhacay oo ay hadda kasoo kabanayso.
Xill Abdishakuur Ali Mire